ब्रुस ली को चमत्कारिक जीवन र रहस्यमयी मृत्यु बारे जन्नुहोस, आखिर कसरी ३२ बर्षमै मारि ए वा मरे ? हेर्नुहोस मृत्युको रहस्य | समाचार
June 1, 2021 June 1, 2021 NepstokLeaveaComment on ब्रुस ली को चमत्कारिक जीवन र रहस्यमयी मृत्यु बारे जन्नुहोस, आखिर कसरी ३२ बर्षमै मारि ए वा मरे ? हेर्नुहोस मृत्युको रहस्य
मार्सल आर्ट कलाकार एवं हलिउड अभिनेता ब्रुस ली कसरी अल्पायुमै बिते ?ब्रुस लीको मृत्यु हुँदा उनकी छोरी शानोन ली चार बर्षकी मात्र थिइन् । आफ्ना पितासँग विताएको क्षणहरुलाई स्मरणिय राख्न उनले एक वृत्तचित्र बनाएकी थिइन् ।
भ’क्कानीदै मदनकृष्णले सरकारलाई गरे यस्तो आग्रह
एम्बुलेन्समा गाँजा तस्करी
ए’कैदिन १३ जनाको मृ’त्यु, ५५९ जनामा संक्रमण पुष्टि